Global Aawaj | » सधैँ उदाएका उदयबहादुर सधैँ उदाएका उदयबहादुर – Global Aawaj
सधैँ उदाएका उदयबहादुर
उदयबहादुर श्रेष्ठको जन्म वि.सं. २०१५ सालमा काठमाडौंको इन्टुम्बहालमा भएको हो । उनी युवा अवस्थामा सारै दुब्लो पातलो भएकोले ज्यान बढाउन विकल्पको खोजि गर्दै वि.सं. २०३३ साल तिर नेपाल व्यायाम मन्दिर पुगेको थिए । जहाँ उनको मोहले लय समात्यो । धनश्याम मुखियाको प्रशिक्षणमा उनले छिटो नै आफ्ना दुब्ला शरीरलाई सुगठित पारे ।
तर उनले व्यायाम गर्न थालेको उनका बुबा गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठलाई आखाँ फुटन् मन परेको थिएन । जसका कारण धेरै पटक बुबाको कोपभाजनको शिकार हुन परेको उनि बताउँछन् । यद्यपि उनले आफ्नो साधनालाई निरन्तरता दिई राखे । उनको सुगठित शरीर देखेर साथीहरु अब तिमीले शारीरिक सुगठनका प्रतियोगितामा भाग लिनुपर्छ भन्न थाले । संयोगवशं त्यहि समय अर्थात वि.सं. २०३८ सालमा राखेपले नेपाली खेलकुद क्षेत्रको प्रथम वृहत राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजन गर्दै थियो । जसमा शारीरिक सुगठन खेलपनि समावेश थियो ।
पहिलो प्रतियोगितामा नै उनिले ६५ केजी भन्दा माथि बजन समुहमा ज्योति जंग राणा प्रथम र उनि दोश्रो हुन सफल भए । जसबाट उनलाई थप हौसला मिल्यो । सोहि वर्ष भएको मिस्टर काठमाडौं खुल्ला शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा धेरै प्रतियोगीलाइ पछि पार्दै कास्य पदक सहित बेष्ट ब्याक उपाधि जित्न सफल भएको उनले बताए । बलिष्ठ र मिलेको शरीरका कारण विज्ञापन कम्पनीहरु उदयलाइ आफ्नो उत्पादनको विज्ञापनका मोडलिङ्गका लागि अनुरोध गरे । उनले त्यस पछि थुप्प्रै बिज्ञापनहरुमा आफ्नो शुगठित शरीर पस्किए । नेपाल टेलिभिजनका शुरुवातका विज्ञापनमा आउने च्याम्पियन जुत्ता, स्पार्क जुत्ता र ग्लुकोज डी लगाएतका विज्ञापनबाट उनि त्यतिबेला निकै चर्चित थिए । क्रमशः उनी नेपाली ठुला र साना पर्दा चलचित्र टेलिचलचित्रहरुमा समेत अभिनय गर्ने अवसर पाए । उनले खेलेका चलचित्रहरु चोखोमाया, दाजुभाइ लगाएतका छन् ।
अभिनयसगँ उनको शारीरिक सुगठनको यात्रा पनि निरन्तर चहिरह्यो । उति बेलाको रमाइलो प्रसङ्ग सम्झदै उदय श्रेष्ठको जीवनसंगीनि निमु श्रेष्ठ विगत संझन्छन् ।, “हाम्रो कलेज अगाडीको फोटो स्टुडियोमा उहाँको फोटाहरु ठुलाठुला पोस्टरहरु बनाएर राखिएका थिए । कलेजका धेरै केटीहरु उनका बारेमा रमाएर कुरा गर्ने र पोस्टर किनेर घरमा लगि टाँस्ने गर्थे । उनका एक झलक हेर्न लाम लाग्ने र तस्विर किनेर घर लाने धेरै केटीहरु मध्ये म पनि एक थिए ।” उनले हाँस्दै भनिन् । व्यायाम गर्न शुरु गरेको संस्था नेपाल व्यायाम मन्दिरको वि.सं. २०४० साल देखि ४२ साल सम्म उनी अध्यक्ष समेत बने ।
वि.सं. २०४५ सालमा उनले शारीरिक सुगठन राष्ट्रिय निर्णायकको लाइसेन्स प्राप्त गरे । धेरै मानिसहरुले उनलाई भेट्दा हामीलाई पनि तपाइको जस्तै शरीर बनाउन सिकाई दिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न थाले । उनले आफ्नै निजी लगानीमा २०४५ सालमा काठमाडौंको ताहाचलमा काठमाडौं जिम सेन्टर सञ्चालन गरे । जुन निजी क्षेत्रबाट खोलिएको पहिलो जिम भएको उनको दाबी छ ।
वि.सं. २०६६ सालमा अन्र्तराष्ट्रिय निर्णायकको लाइसेन्स लिएर उनले हालसम्म पनि देशविदेशमा हुने शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताहरु निर्णायकको भुमिका निवार्ह गरिरहेका छन् । शारीरिक सुगठन खेलको विकास झन्डै चार दशक लामो उनको योगदानको कदर गर्दै वल्ड बडी बिल्डिङ एण्ड फिजिक्स स्पोर्टिङ फेडरेशनले उनलाई सम्मान समेत गरिसकेको छ ।